Mooshin la hor Keenay Golaha Wakiiladda Somaliland. | Hargeysa World~Herald
Mooshin la hor Keenay Golaha Wakiiladda Somaliland.
UncategorizedMooshin la hor Keenay Golaha Wakiiladda Somaliland.
Todobaadkii dhammaaday ayuu Golaha wakiilada soo gaadhay qooraal Madaxweyne biixii kaga codsanaayo in golaha wakiiladu ka doodaan oo dhaqan geliyaan xeerka Nidaamka Ururada iyo Axsaabta Siyaaasadda Xeer Lr. 14/2021.
Xeerka waxaa aad uga qayliyey bulshada iyo siyaasiyiin kale duwan, halka qaar badani soo dhoweeyen, dad iyo siyaasiyiin kalena deedafeeyeen.
xeerkan Nidaamka Ururada iyo Axsaabta Siyaaasadda Xeer Lr. 14/2021 haddii Golaha Wakiiladu ansixiyaan waxaa waxa uu noqonayaa dhaqan gal. waxaana la furayaa ururada taas oo saamaxaysa in saddexdan xisbi ay galaan tartan ayna keensato in ay dhibaato siyaasadeed oo ballaadhan halkaas ka soo waajahdo.
hadaba maanta waxaa Golaha Wakiilada la keenay mooshin ay ku saxeexanyihiin 28 mudane. mooshinkaas oo guddoomiyaha Golaha Wakiilada lagaga codsanaayo inuu joojiyo in xeerka Nidaamka Ururada iyo Axsaabta Siyaaasadda Xeer Lr. 14/202 aan la keenin golha wakiilada.
“Anagoo ah Mudanayaasha magacyadoodu hoos ku qoranyihiin waxaa halkan ku soo gudbinaynaa mooshi ku saabsan in lajoojiyo a doodida xeerka Nidaamka Ururada iyo Axsaabta Siyaaasadda Xeer Lr. 14/2021” ayaa ay Mudanayaashani ku soo gudbiyeen mooshinkooda.
ugu danbayn, xeerka Nidaamka Ururada iyo Axsaabta Siyaaasadda Xeer Lr. 14/2021 waxa uu keeni doona muran badan oo soo waajaha siyaasiyiinta iyo xubnaha Golaha Wakiilada JSL.